Wararkii ugu dambeeyay Qarax shaqaale lala eegtay oo ka dhacay Muqdisho - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Wararkii ugu dambeeyay Qarax shaqaale lala eegtay oo ka dhacay Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa Qarax miino nooca dhulka la geliyo ah oo ka dhacay degmada Hodan ee Gobolka Banaadir, kaasi oo lala eegtay gaari ay la socdeen xubno ka tirsan shaqaalaha dhisaya wadada xiriirisa Magaalada Muqdisho iyo Afgooye.
Goobjoogayaal goobta ka agdhawaa xiligii uu qaraxu dhacayay ayaa ku warramay in qaraxaas ay badbaadeen xubnaha la socday gaariga oo ahaa kuwa Soomaalida oo wax ka dhisaya wadada Muqdisho iyo degmada Afgooye.
Inta la xaqiijiyay qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday qaraxa, halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray oo loo qaaday Xarun Caafimaad, waxaana jugta qaraxaas laga maqlay xaafado ka tirsan degmooyinka Gobolka.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka ayaa gaaray aaga uu qaraxu ka dhacay, isla markaana wadada xiray, iyadoona uu hakad galay isku socodka gaadiidka iyo dadka halkaas, wallow markii dambe dib loo furay.
Al-shabaab ayaa horey qaraxyo isugu jiray miino dhulka lagu aasay iyo mid Is-miidaamin ah la beegsatay Injineero Turki ah oo dhisayay wadada xiriirisa Magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana qaraxyadaas ka dhashay khasaaro isugu jiray dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray Injineero iyo Askar Ciidan.